‘बाई बाई बाबा’ भन्दै मामल गएकी छोरीको मामल नपुग्दै मृ’त्यु, हार्दिक श्रदाञ्जली !! पूरा विवरण हेरि सेयर गरौं – Dainiksamchar
HomeNews‘बाई बाई बाबा’ भन्दै मामल गएकी छोरीको मामल नपुग्दै मृ’त्यु, हार्दिक श्रदाञ्जली !! पूरा विवरण हेरि सेयर गरौं
November 12, 2020 admin News 12119
आफ्ना बाबुलाई बाबा बाई भन्दै घरबाट निस्किएकी बालिकाको मामल नपुग्दै ज्या’न गएको छ। मामल अगाडिको गेटमा द’र्दनाक दु’र्घटनाबाट बालिकाको ज्या’न गएको हो। महिलाले आफ्नी छोरीलाई स्कुटीमा राखेर मामल आएकी थिइन्। तर मामल नपुग्दै उनको स्कुटी दु’र्घटना भयो। ट्याक्टरले बालिकाको टाउको कि’च्दा उनको घ’टनास्थलमै ज्या’न गएको हो। महिलाको हातमा ग’हिरो चो’ट लागेको छ।
यो घ’टना भारतको गुजरातस्थित वलसाड क्षेत्रको हो। त्यहाँको डेमंड कम्पनीमा नाइट ड्युटी गर्ने अजमेरी आफ्नी पत्नी र छोरीसँग वलसाडमा बस्दै आएका थिए। शुक्रबार छोरीलाई स्कुटीमा लिएर मामल गएकी उनकी पत्नी पनि घा’इते भइन्। उक्त दु’र्घटनाले उनको सुखी परिवारको खुसी एकै छिनमा लु’टिएको हो।
काठमाडौँ । रक्तचाप अचानक न्यून भएमा यसले शरीरका विभिन्न अं’गमा हा’नि पुर्‍याउन सक्छ। प्रेसर लो भएको महसुस भएमा के गर्ने ? अपनाउनुस् यी उपायः
नुनमा सोडियम पाइन्छ, जसले ब्लड प्रेसर बढाउन मद्दत गर्छ। प्रेसर लो भएमा एक ग्लास पानीमा डेढ चम्चा नुन हालेर पिउनुपर्छ।
ब्लड प्रेसर कम भएमा स्ट्रोङ कफी, हट चकलेट, कोकाकोला अथवा क्याफिनयुक्त खाद्य पदार्थ खानाले प्रेसर सन्तुलनमा आउँछ। यदि सधैं प्रेसर लो भइरहन्छ भने हरेक बिहान एक कप कफी खाने गर्नुपर्छ । तर, कफीसँगै केही खानेकुरा खान भुल्नु हुँदैन।
प्रेसर लो भएमा किसमिस खानु पनि लाभदायक हुन्छ । प्रेसर लो भइरहन्छ भने राति केही किसमिस भिजाएर भोलिपल्ट बिहान भिजेको किसमिस र त्यसको पानी खाने गर्नुपर्छ।
तुलसीमा भिटामिन-सी, पोटासियम, म्याग्नेसियमजस्ता तत्व पाइन्छन्। प्रेसर लो भएमा १०-१५ वटा तुलसीका पत्ता जुसमा हालेर त्यसमा एक चम्चा मह हाली पिउने गर्नुपर्छ।
कागती पानीले उच्च र न्यून रक्तचाप दुवैमा लाभ गर्छ । प्रेसर लो भएमा कागती पानीमा अलिकति नुन र चिनी हालेर पिउनुपर्छ।
मङ्सिर महिनामा भाइटीका पर्‍यो..,के दाइलाई टीका लगाउन हुँदैन त ?
मंसिर १ भाइटीका लगाउन अशुभ रहेको भन्दै बजारमा ठूलो हल्ला फिँजिएपछि बोल्यो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति, के हो मनासिब ?
बसले स्कुटीलाई ठ’क्क’र दिँदा दुधे बालक सहित आमावुवा को घटनास्थलमै निधन
September 28, 2020 admin News 1572
काठमाडौ । कलैयामा बसले स्कुटीलाई ठ क्क र दिँदा आइतवार साँझ तीन जनाको घटनास्थलमा निधन भएको छ । आज साँझ ५ बजे जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका १ पूर्वपश्चिम सडकखण्डको दुधौरा पुलबाट दुई सय मिटरपूर्व सडकमा निजगढबाट
October 2, 2020 admin News 1041
जुम्ला । विकट कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा बसेर सेवा गरिरहेका नागरिकको मनमा बसेका डाक्टरको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । त्यहाँ कार्यरत अर्थोपेडिक सर्जन डा हरि सापकोटाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको हो । उहाँको उपचारको क्रममा
October 10, 2020 admin News 813
काठमाडौँ । खानेपानी उद्योग तथा व्यापारीले पछिल्लो समय जार र बोतलको पानीको मूल्य आफूखुसी बढाएर बिक्री गर्न थालेका छन् । पानी उद्योगले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनुमति लिएर वाणिज्यले तो’केको अधिकतम बिक्री मूल्य
LEX 18 agenda conversation: Job club (121722)
digital tendencies live recently welcomed Lauren abettor (113626)
Hello world! (113299)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (112057)